के मेस्सीले अर्जेन्टिनाको २८ वर्षे उपाधि खडेरी तोड्लान ? — Imandarmedia.com
काठमाडौं । विश्वकै सबैभन्दा पूरानो फुटबल प्रतियोगिता कोपा अमेरिकाको ४७औं संस्करणको उपाधिका लागि ल्याटिन अमेरिकन दुई पावर हाउस ब्राजिल र अर्जेन्टिना भिड्दैछन् ।
ब्राजिलमै भइरहेको यस प्रतियोगिताको फाइनलमा उत्रिदा अर्जेन्टिनाका कप्तान लिओनल मेस्सीका लागि पहिलो मुख्य प्रतियोगिताको उपाधि जित्ने अवसर हुनेछ ।
फाइनल खेल शनिबार (नेपाली समयअनुसार आइतबार बिहान) रियो दि जेनरियोस्थित माराकाना स्टेडियममा हुँदैछ । ३४ वर्षीय मेस्सीले बार्सिलोनाबाट १० पटक ला लिगा र ४ पटक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितेका छन् ।
६ पटकको बालोन डे ओर विजेता मेस्सीले अर्जेन्टिनाका लागि भने सन् २००८ मा चीनमा भएको ओलम्पिकमा मात्रै स्वर्ण पदक जितेका थिए । उता ब्राजिलका डिफेण्डर मार्क्वन्होसले मेस्सीलाई आफ्नो उद्देश्यमा पुग्नबाट रोक्न प्रयास गर्ने बताएका छन् ।
२०२१ को कोपा अमेरिका अर्जेन्टिनाको लागि मेस्सीको १०औं मुख्य प्रतियोगिता हो । उनी छैटौं पटक कोपा अमेरिका खेलिरहेका छन् भने चार पटक विश्वकप खेलिसकेका छन् ।
विश्वकपमा मेस्सीले कुल १९ खेल खेल्दा १२ खेल जितेका छन भने ४ खेल हारेका छन् । उनले ४ विश्वकपमा ६ गोल गरेका छन् । यस्तै कोपामा उनले ३३ खेल खेल्दा २० खेल जितेका छन् भने ३ खेल मात्र हारेका छन् । जसमा उनले १३ गोल गरेका छन् ।
फिफा वरीयतामा आठौं स्थानमा रहेको अर्जेन्टिनाले पछिल्लो पटक १९९३ मा कोपा जितेपछि चार पटक कोपा फाइनल हारिसकेको छ । यस पटक अर्जेन्टिनालाई सर्वाधिक १५ पटक उपाधि जित्ने उरुग्वेको कीर्तिमान बराबरी गर्ने अवसर छ
स्पानिस क्लब बार्सिलोनामा सम्झौता सकिएका मेस्सीले ब्राजिलमा जारी कोपामा ४ गोल गरिसकेका छन् । कुनै समय बार्सिलोनमा टिममेट रहेका ब्राजिलका नेयमार पनि आफ्नो देशबाट पहिलो मुख्य पउपाधिको खोजीमा छन् ।
सन् २००७ यता ब्राजिल र अर्जेन्टिना पहिलो पटक कोपा फइनलमा भिड्दैछन् । अर्जेन्टिनाका प्रशिक्षक लियोनल स्कोलानी चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध फाइनल खेल्न लागेको र यी दुई टिम दक्षिण अमेरिकाकै दुई शक्तिशाली टिम रहेको बताए । उनले खेल उत्कृष्ट हुने आशा राखेका छन् ।
१० टिमलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको थियो । दुवै समूहका शीर्ष चार टोली क्वाटरफाइनल पुगेका थिए । ब्राजिलले क्वाटरफाइनलमा चिली र सेमिफाइनलमा पेरुलाई समान १-० ले हरायो । उता क्वाटरफाइनलमा इक्वेडरलाई ३-० ले सहजै हराएको अर्जेन्टिनाले सेमिफाइनलमा कोलम्बियालाई पेनाल्टी सुटआउटमा ३-२ ले पराजित गर्‍यो ।
अर्जेन्टिनाले २८ वर्षको उपाधि खडेरी तोड्ला ?
फिफा वरीयतामा आठौं स्थानमा रहेको अर्जेन्टिनाले पछिल्लो पटक १९९३ मा कोपा जितेपछि चार पटक कोपा फाइनल हारिसकेको छ । यस पटक अर्जेन्टिनालाई सर्वाधिक १५ पटक उपाधि जित्ने उरुग्वेको कीर्तिमान बराबरी गर्ने अवसर छ ।
के त्यसमा अर्जेन्टिना सफल होला त ? दुई वर्षअघि घरेलु मैदानमा उपाधि जितेको ब्राजिलले भने अहिलेसम्म ९ पटक मात्र कोपा जितेको छ र सर्वाधिक जित्नेमा तेस्रो स्थानमा छ । ब्राजिल लगातार दोस्रो पटक उपाधि जित्ने लक्ष्यमा छ ।
ब्राजिलका डफेण्डर मार्क्विन्होसले यस खेललाई सामान्य फुटबलभन्दा पनि अझ बढी मानेका छन् । यो जर्सीले सारा विश्वलाई खेल हेर्नका लागि आकर्षण गर्ने उनले बताए ।
पेरिसमा भेट्ने बाचा
टोक्यो ओलिम्पिक्स: १०० मिटर दौडमा स्वर्ण पदक जित्ने लेमन्ट मार्सेल जेकोब्स को हुन्
टोकियो ओलम्पिकमा चीनले गुमायो शीर्ष स्थान, कसको कति ? सूचिसहित
टोकियो ओलम्पिक : ७० पदकसहित चीन शीर्ष स्थानमा कायमै, कसको कति ?